Ihhovisi leyunifomu yebhulukwe lendwangu abakhiqizi abenziwe ngezifiso nabaphakeli | I-Yun Ai
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Indwangu yasebhange iyunifomu yebhulukwe lendwangu eyenziwe ngezifiso
Ukuphefumula: Kuyaduduza Ngempela Futhi Kulula Ukugqoka Kuyo Yonke Isikhathi.
Esilula: Ilungele ihhovisi nezindawo ezingajwayelekile.
Isitayela Sokubamba Amehlo: Sikhombisa ubuntu bakho nesitayela njalo uma usigqoka.
Ukuqina: Le ndwangu yokufanelana yesudi ingu-57/58 ”Usayizi obanzi futhi yakhiwe ngo-80% we-polyester no-20% we-rayon. Le ndwangu ihlala isikhathi eside ngokwakhiwa, ihlala isikhathi eside, ifinyeleleka kalula ukuwashwa nokunakekelwa.
Imibala ye-Mutiple: Itholakala ngemibala ehlukahlukene nezimfanelo, lezi zingenziwa futhi zenzelwe ukuhambisana nezidingo ezithile zamakhasimende ethu.
Ukwakheka: 80% Polyester, 20% viscose
Iphakheji: Ukupakisha okugoqiwe / okulindwe kabili
Ububanzi: 57/58 ”（148cm）
Into Cha: YA17048
Amakhono: Nokwelukiweyo, ntambo edayiwe
Ukubala kwentambo: 20 * 20
Ubuningi: 100 × 90
I-MCQ: Iroli eli-1 (cishe amamitha ayi-100)
MOQ: 1200 amamitha
Le ndwangu ye-polyester rayon ilungele ibhulukwe leyunifomu yasehhovisi. Izinga layo eliphakeme lenza kube lula ukusebenzisana nokuthunga izingubo.
Sigxile ekuhlinzekeni izindwangu eziningi zemifaniswano yesikole, indwangu yomfaniswano wezindiza kanye nendwangu yesudi yehhovisi, eyenzelwe ngokukhethekile abasebenzi abahlukahlukene njengabafundi, umphathi womoya, abashayeli bezindiza, abasebenzi basebhange, abasebenzi be-horeca, amalungu eqembu nabanye.
Amafektri ethu anezinto ezisezingeni eliphakeme, njenge-German Durkopp, i-Japan Brother, i-Juki, i-American Reece njll Kwenziwe imigqa engu-15 esezingeni eliphezulu yokukhiqiza izingubo zendwangu yokuqoqwa kwezingubo ezahlukahlukene, umthamo wokukhiqiza wansuku zonke ufinyelela kumamitha ayi-12,000, futhi ifektri yokudaya yokuphrinta ehlukahlukene iyasebenzisana futhi imboni yokumboza. Ngokusobala, singakunika indwangu yekhwalithi enhle, intengo enhle kanye nensizakalo enhle. Ngaphandle kwalokho, Sinamaqembu abaphathi bokukhiqiza abalandela ngokuqinile izindinganiso zamazwe omhlaba nezindinganiso zekhwalithi yomkhakha. Ngaphandle kwalokho, sineqembu lomklami elinolwazi kakhulu elisebenza kumaqoqo ahlukene. Siphinde sibe neqembu eliqinile le-QC elinabahloli bekhwalithi abangaphezu kuka-20 abasebenza kwinqubo ehlukile yokukhiqiza.
Sinayo le ndwangu esitokweni kodwa futhi sisekela ama-oda enziwe ngokwezifiso, uma unamasampula akho, vele uthumele kithi, ngokuxhumana okuqhubekayo ngamasampuli athile, sizokunikeza imiphumela eyanelisa kakhulu nokuqinisekiswa kokugcina kwama-oda.